जीवराज आश्रितकी छोरीको अनुरोध, नेकपा सरकारलाई !
बुबालाई पेटको रोग थियो । डा. सुन्दरमणि दीक्षितले अल्सर भइसकेको बताउँदै धेरै हिँडडुल नगर्न, बाहिर खाना नखान सुझाव दिनुभएको थियो । तर, पार्टी महासचिव (मदन भण्डारी) र संगठन विभाग प्रमुख (बुबा) पोखरा हुँदै चितवन जाने कार्यक्रम पहिल्यै तय भएकाले उहाँहरु जानुभयो ।
मदन अंकल र बुबा २ जेठमा पोखरा पुगेर हरि पाण्डेको घरमा बास बस्नुभयो । ३ जेठको बिहान खान खाएर अमर लामाले चलाएको जीपमा चितवन जाँदै गर्दा दासढुंगामा घटना भयो । मदन भण्डारी र बुबालाई हामीले सदाका लागि गुमायौं ।
२०४६ अघि पार्टीका अरु नेताजस्तै बुबा पनि भूमिगत हुनुभएका कारण हामीले उहाँको सानिध्य कमै पायौं । जनआन्दोलन सफल भएपछि मात्र हामी बुबासँग काठमाडौंमा बस्न पायौं । डल्लुभन्दा अघि कालिमाटीमा हाम्रो डेरा थियो । त्यसअघि करिब चार वर्ष पोखरा बस्दा बुबा यदाकदा हामीलाई भेट्न आउनुहुन्थ्यो ।
जीप चालक अमर लामाको पनि हत्या भएका कारण दासढुंगा प्रकरण अझ रहस्यमय बनेको छ । लामाका हत्यारा पनि पत्ता लागेका छैनन् । तर, सरकारले चाहेको खण्डमा अपराधविज्ञहरु राखेर उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन कठिन छैन । त्यसबाट केही न केही परिणाम पक्कै आउने छ । नेकपाको सरकारले मदन–आश्रितप्रति अर्पण गर्ने यो भन्दा सच्चा श्रद्धाञ्जली अरु हुनै सक्दैन ।
प्रकाशित मिति ३ जेष्ठ २०७७, शनिबार २३:०४